निर्वाचनबाट कांग्रेस भाग्‍न आवश्यक छैन ः एनपी साउद - Primekhabar.com
अन्तर्वार्ता देश प्राइम समाचार बैनर न्युज भर्खरै लोकप्रिय समाचार
८ पुष २०७७, बुधबार प्राइम खबर डेस्क	0 Comments	एनपी साउद
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस विघटनको विरुध्दमा आन्दोलनमा जान्छ कि निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ ?
कानुनी प्रश्‍नको निरूपण अदालतले गर्ने र अहिलेको सरकार मध्यावघि निर्वाचनमा गइसकेपछि हामी त्यसबाट पछाडि हट्नु पर्ने कारण म देख्दिनँ । असंवैधानिक हो भने अदालतले निरूपण गर्छ । र अन्यथा पार्टीका सकल दर्जा नेता कार्यकर्ता साथीहरूले चुनावको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु ।
सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कदम सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
सरकारले सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारणले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गर्ने काम गर्‍यो भन्‍ने विषयमा कांग्रेसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । तर, सरकारले संसद्को निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले कांग्रेस निर्वाचनबाट पछाडि भाग्‍न सक्दैन ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । पार्टी अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ ?
पार्टी महाधिवेशन भनेको संगठनको आन्तरिक गतिविधि हो । आम निर्वाचन नै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । बनाउनु पर्छ ।
← देशको महत्वपूर्ण समयलाई अल्मल्याएर खेर फाल्नुभन्दा ताजा निर्वाचन नै सही विकल्प : प्रम
ओलीको संश्लेषण : संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, हामीलाई हार्ने छुट छैन →
ओलीको संश्लेषण : संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, हामीलाई हार्ने छुट छैन
१० पुष २०७७, शुक्रबार प्राइम खबर डेस्क	0